नन्दको बुढाले मेरो पुति चिकेको रात - Nepali Sex Tube
मेरो नाम राधिका भट्टराई हो। म इटहरीमा बस्छु ।म अहिले 30 वर्षको भए। मेरो आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि बिहे भएको थियो। त्यसबेला म 17 वर्षको थिए । बाबाले केटा धनी पढेलेखेको केटा छ सुख संग जिन्दगी कट्छ भनेर फकाएर आफुभन्दा 15 वर्ष जेठो केटा संग बिहे गरिदिनु भयो। त्यसबेला उ 32 वर्षको थियो। निक्कै कहलिएको व्यापारी थियो।
मेरो रुप बैँस र यौवन देखेर म संग बिहेको कुरा चलाएको थियोे उसले । म पनि सुखी जिन्दगीको लालचमा बिहे गर्न तयार भएको थिए । बिबाहको रातभरमा 4/5 उसले मेरो भर्जिनिटिको मजा लुट्यो। निकै केटाहरु पछि लागे पनि मैले त्यसबेला सम्म कसैलाइ चिक्न दिएको थिइन। सुरुसुरुमा त हाम्रो बैबाहिक जिबन राम्रै चल्यो। डेढ वर्ष पछि हाम्रो एउटा छोरी जन्मी । अनि बिस्तारै बिस्तारै मेरो बैबाहिक जीवनमा फिक्कापन आउनथाल्यो।
उ व्यापारको लागि 3/4 दिन सम्म बाहिरै बस्न थाल्यो। संगै सुते पनि उसले मलाई चलाउन छोड्यो। उसलाई मधुमेह (diabetes )भएको थियो। डाईबिटिज भए पछि हतियार उठ्दैन अरे। तेहि भर उसले चाहेर पनि मेरो इच्छा पुर्ती गर्न सकिरहेको थिएन। म पनि आफ्नो परिवार सम्झेर आफ्नो चाहनालाइ दबाइराखेको थिए। तर कतिन्जेल सम्म दबाउन सक्थे र यो गुम्सिएर बिस्फोट हुन लागेको थियो।
यस्तैमा मा रबिन(नन्दको बुढा) हाम्रो घर आए। केहिदिन अगाडि निता (नन्द ) आएकी थिइन। बिहे भको 15 दिनमै उ बुडा संग मतभेद भएर हाम्रो घर (माइत)आएकी थिइन। त्यसपछि उ घरजान मानिनन्। रबिनलाइ मैले केहिदिन यहि बस्नु म सम्झाएर नितालाइ तपाइसंग पठाउला भने। रबिनले पनि हुन्छ भने।
किन घर जान नमानेको भनेर मैले नितालाइ सोधे। निताले रबिन एकदमै बोका भएको र उसको लाडो ठूलो भएको अनि हरेक रात रातभर चिक्ने गरेकोले खप्न नसकेर आफू माइत आएको कुरा बिस्तारै बताउँदै गइन।निताले यसो भन्दा मेरो जिउ सिरिंग भो। निताले त्यसो भने पछी रबिन अगाडि बस्दा मेरो ध्यान उसको पेन्टको फस्नरतिर जान थाल्यो। नभन्दै उसको माल गज्जबकै ठुलो थियोे ।
म घरमा बस्दा पनि राम्री भएर बस्ने गर्थे। मलाई 22 वर्षको भर्भराउदो जवानिले ढपक्क छोपेको थियो ।गहुँगोरी ,5.4 फुट अग्लि अनि 38-28-40 मेरो फिगर थियो । ठुल्ठुलो बुबु अनि छिनेको कम्मर ,गोलो गोलो ठुलो चाक अनि पोटिलो खालको मेरो थाइ देखेर म तिर रबिन आकषिर्त हुँदै थियो। उ मेरो नजिक आउने र मलाई छुने कुनै मौका छोड्दैनथ्यो। नानी संग खेल्ने अनि किचनमा मलाई हेल्प गर्थ्यो।
अलिअली गर्दै उ मसंग जिस्किन इत्रिन थालेको थियो। एकदिन मेरो बुढा बाहिर जानू भएको थियो दुई तीन दिनको लागि। म किचनको काम गरिरहेको थिए।
‘के हो दिदि, दाइले माया गर्न छोड्नु भो के हो? निराश देखिनु हुन्छ त?’ उसले भन्नखोजेको कुरा मैले बुझिहाले अनि मैले ” खोइ ज्वाइँ आजकाल उहाँ ब्यस्त भएर होला ,घरमा टाइम नै दिन सकिरहोनु भको छैन।”
‘हो र? चिन्ता नलिनु न दिदी उहाँ बिजि भए पनि हामी छौ नि तपाईं संग। म छु नि तपाईंलाई साथ दिने” भनेर रबिनले सिधै चिक्ने कुरा गर्यो। लाजले रातो हुँदै म त्यहाँबाट हिडे। बेलुका राती म सुत्ने बेला भएको थ्यो। निता र रबिन बेग्लाबेग्लै सुत्थे। मेरो नानी पनि फुपुसंग सुत्न गएकि थी । यो कुरा रबिनलाइ राम्रो संग थाहा थियोे ।
जाडोको मौसम थियो। रबिनले मलाई कल गर्यो। मैले उठाए अनि उसले “दिदी म आएको पनि निक्कै भो अहिलेसम्म निता घर जान मानेकै छैन अब भोलि घर जाउँ भनेको?।अनि त्यहि बिषयमा कुरा गर्नु पर्नेथ्यो ।म तपाईंको रुममा आम?’ भनेर सोध्यो। मैले पनि सोझो मनले हुन्छ नि त भनेर भनिदिए।
एकछिन पछि रबिनले ढोका ढकढक्यायो। अनि मैले ढोका खोलेर भित्र आउन अनुरोध गरे। उ पनि सिधै आएर मेरो बेडमा बस्यो। म पनि बेडमा खुट्टा पसारेर बसे। उ मेरो खुट्टाको छेउमा बसेको थियो। अनि मैले माथिबाट सिरक ओढे। उसले पनि आछु छु छु भन्दै त्यही सिरकले आफुलाइ ढाक्यो। अनि निताको कुरा निकाल्यो ।
रबिनलाई मैले सम्झाउन थाले । तपाईंले धेरै सताउनु भयो अरे। अब भर्खरकी केटी अलिक कुरा बुझ्दिन।केही समय अरु लाग्ला सम्झाउन । मैले यति भन्दाभन्दै उसले आफ्नो हात मेरो खुट्टामा राख्यो। अन्जानमै परेको होला भनेर केही बोलिन। तर कुरा गर्दै जादा उसले हातलाइ माथितिर सार्न थाल्यो। उ यसरी म संग कुरा गरिरहेको थियो कि मानौ उसले केही गरिरहेकैछैन। मलाइ भने अफ्ठेरो लाग्न थाल्यो।
बिस्तारै उ मेरो घुडासम्म आइपुगेको थियो। उसले अलिअलि गर्दै मेरो तिघ्राको साप्रातिर सार्दैथ्यो। म भने क गरु के गरु भैरहेको थिए। अनि मैले उसको हात समाएर हटाइदिए। त्यसपछी उ एकैछिनको लागि शान्त भयो र फेरि उहीँ हरकत देखाउन थाल्यो।
उसले अाफ्नो हातका औलाहरु रुखमा सर्प चढे झै गरेर मेरो तिघ्रामा दौडाइरहेको थियो। यति हुदा सम्म हाम्रो बातचित चलिरहेको थियो। अत्ति भए पछि मैले रबिनलाई “ज्वाइ के हरकत हो यो” भने उ बोलेन। मैले फेरि हातले समातेर उसको हटाइदिए । उ फेरि केही नबोली आफ्नो काम अघिबढाउन थाल्यो। मैले फेरि उसको हात झट्कारेर हटाइदिए अनि” हात उता लानु मलाई नछुनु”भने ।
उ त रोकिने वाला नै थिएन।उ झन मेरो सामुन्ने आएर दुबै हातले मेरोतिघ्रा मुसार्न थाल्यो। मैले अहिलेसम्म बाँधेर राखेको जवानीको त्यो बाँध अलिअलि गर्दै मैन पग्ले झै गरि पग्ली रहेको थियो। बिस्तारै बेहोसीको आगोमा जल्दै थिए म। मुखले जत्ती जे नाइ नास्ती गरेपनी शरीरले मागिरहेको थियोे । अनि उ बिस्तारै बिस्तारै मतिर ढल्किन थाल्यो ।”हेर्नू ज्वाइँ यो गलत हो यो के गर्न खोज्नु भ’को ? तपाईंको अाफ्नो बुढी छ मेरो बुढा आफ्नै छ। कसैले थाहा पायो भने के हुन्छ? ” भनेर फेरि सम्झाउने कोसिस गरे। तर उ टेर्ने वाला कहाँ थियो र?
उसले आफ्नो हातले मेरो दुबै गाला पछाडी समायो अनि मलाई हेर्यो अनि त उसले मेरो ओठमा उसको ओठ जोडिदियो। मैले उसलाई छुटाउन कोसिस गरे । छोरा मान्छेको बलको अगाडि छोरी मान्छेको के नै लाग्छ र उसले झन कसेर समाएर किस गर्न थाल्यो। अनि मलाई उसले बेडमा सुताउन थाल्यो।
यो काममा पनि उ सफल भयो। अनि त के चाहियो र उसलाई भोको बाघले झै गरि म माथी आइलागो अनि मेरो पैताला बाट सुरु गरेर ओठ गाला घाटितिर किसको वर्षा गराउन थाल्यो। अनि त मेरो धैर्यताको बाध पनि टुटीसकेको थियो।
उसको हरकतको बिरोध गर्दागर्दै कताकता उसको स्पर्शलाई स्वीकार गर्न थालेछु। मेरा बिरोध गर्ने हातहरु अब दर्शक जस्तो भएर हेरिरहेका थिए। उ हरतरहले मलाई गलाउन लागिपरेको थियोे र उ हरेक पाइलामा उ सफल पनि भइरहेकोथ्यो।
बिस्तारै उसले आफुलाई मेरो दुई खुट्टाको बिचमा पार्न सफल भयो। अनि त उसलाई के चाहियो र आधा युद्ध उसले जितिसकेको थियो। अब त उसले मेरो घाँटीमा किस गर्दै थियो। बुबुमा हातले दबाउदै थियोे भने तल मेरो पुतिमा भने लुगा माथिबाटै उसले आफ्नो मोटो लाडो दलिरहेको थियो। उसको लाडोको घर्षणले मेरो पुतिको तापक्रम बढ्दै थियो ।
अब त मेरो पुतिमा आगोमा परेको मैन पग्ले झै गरि पानी रसाउन थालेको थियो। आखिर मेरो पुति पनि धेरै दिनको भोको थियो। मेरो मनले मलाई अघि बढ्नबाट रोकिरहेको थियोे तर मेरो शरीरले मलाई आफ्नो चाहना चिच्याई चिच्याई भनिरहेको थियोे । अब त म पनि एकाएक उसलाई सघाउन थालेछु। उ पागल झै मेरो ओठ घाँटी गालातिर किस गरिरहेको थियो। मेरा यी हातहरु उसलाई अंगालोमा बाध्न पुगेछ।
रबिन अब मलाई नंग्याउन थाल्यो। त्यतिबेला मैले नाइटी लगाएको थिए। नाइटी खोलिदिए पछि उसले मेरो नग्न शरीरभरि आफ्नो आँखा दौडायो । अनि हल्का मुस्कायो र घुटुक्क थुक निल्यो। उसको मुहारमा हवस प्रष्ट देखिन्थियो। अब उसले पनि लुगा खोल्यो । उसको अगाडी म ब्रा र पेन्टीमा थिए । उ भने सम्पुर्ण नांगो थियो।अनि उ ब्रा माथीबाट मेरो बुबु माड्न थाल्यो। अनि ओठ भित्र जिब्रो छिराएर मेरो जिब्रो चुस्न थाल्यो।
त्यसपछि उसले मेरो ब्रा पनि खोलेर फ्याकिदियो।अनि उ मेरो दुधको मुन्टा चुस्न थाल्यो। 5/6 मिनेट दूध चुसिसकेपछी उ बिस्तारै मेरो पुति तिर अघि बढ्यो। उसको लाडोको घर्षणले मेरो पुति पानी पानी भैसकेको थियो। उ अलि तल सर्यो अनि नाइटो देखि किस गर्दै गर्दै पुति सम्म पुग्यो।
यति सम्म हामीहरु एकदम एकाअर्कामा समर्पित भइसकेका थियौ। मेरो पुतिबाट ३०० मिली लिटर र पानी नै झरी सकेको थियो भने पेन्टी त धुनलाई भिजाको जस्तै लपक्क भै सकेको थियो । हत्त न पत्त पेन्टी फुकाली दिएर उसले जिब्रोलाई मेरो पुतीको टुप्पामा लगेर जोड्यो । आहा खै के खै के र्याल नै र्याल भएको चिप्लो पानी झरेको पुतीको टिसि खेलाउदा एउटा बेग्लै आभास भएको थियो। म जति उ पुतीमा जिब्रो छिराउथ्यो उति म पनि मेरो कम्मर उचालेर उसलाई हेल्प गर्थे । मैले उसको टाउको समातेर पुतिमा दल्न थाले। उसले पुती चटाईलाई झन छिटो र भित्र सम्म जिब्रोले ठेल्ने थाल्यो ।
त्योबेला म इमोसनले सी ……………सी …………..सी ……………… इस्स……………….. उह …………..अह्ह ………………… उँ ……………… उँ ………….अहँ …………. उह्हँ……………….. अह्ह ………………इस्स …………….सी………………….. सी……………. सी ……. .. अँ…………….जस्ता अवाज निकालेर कोठा घन्काइरहेको थिए । 5मिनेट जति चाटेपछी मलाई अत्ति भएर म खप्न नसक्ने भए। अनि रबिनलाई माथि ताने । उ पनि बोका ,मेरो इसारा नबुझ्ने कुरै थिएन ।उ फेरि मेरो खुट्टाको औला देखि किस गर्दै गर्दै माथी निधार सम्म पुग्यो।अनि मेरो किस गर्दै पुतिमा लाडो सोझ्यायो।
अनि 8″ लामो लाडोले मेरो पुतिमा घोच्न थाल्यो। उसको यति मोटो लामो लाडो देखेर मलाई डर लागिरहेको थियो। मेरो पुति छ्तविछत पार्ने भो भनेर। यत्रो घोर्ले लाडो थाम्न सक्दिन जस्तो लाग्यो । तर मेरो शरीर पनि अब मान्ने वाला थिएन । जे होला होला?भनेर आँखा चिम्लिदिए। उसले लाडो मेरो पुतिको वरिपरि दल्न थाल्यो। मेरो आंङ सिरिङ सिरिङ भो । अनि चिप्लो पानीले लाडोको टाउको भिजायो। अनि दुलोमा लागेर लाडोको टाउको जोड्यो अनि भसाउन थाल्यो उसको घोर्ले लाडो।
लाडो मेरो पुतिको मुखमा पनि छिरेन। मेरो पुति च्यातिएला जस्तो भयो । उसले फेरि निकाल्यो अनि हल्का थुक लगायो। लाडो पुरै चिप्लो पारेर फेरि छिराउन थाल्यो। मेरो शरीर काम्दै थियो। उसले अलिक सिधा पारेर मिलायो। अनि मेरो चाक मुनि सिरानी राख्यो। अनि उसको काठ जस्तो ठन्केको लाडो मेरो कोमल पुतिमा एक्कैचोटी बल गरेर घोच्यो । मेरो त प्राण नै गए जस्तो भो बल्ल आधी छिरेछ। म जोडले चिच्याए। उसले मेरो ओठमा ओठ जोडेर मुख थुन्यो।
अनि बिस्तारै त्यसको त्यो घोर्ले लाडो छिराउदै निकाल्न थाल्यो। पुति दुख्दै थियो । अलिअलि गर्दै मेरो दुखाइ पनि गायब भो अनि मज्जा आउन थाल्यो। म अलि अलि गर्दै रबिनलाइ साथ दिदै तलबाट चाक उचाल्न थाले ।सिरानिले सजिलो भको रबिनलाइ चाक उचालिदिन थाले पछि सुनमा सुगन्ध जत्तिकै भएछ।
अनि बल गरि गरि चिक्न थाल्यो।मलाई पनि मज्जा आइरहेको थियो।अलिअली गर्दै मेरो पुतिमा उसको घोर्ले लाडो सबै छिराएरै छोड्यो।अब मलाई बल्ल थाहा भो ,निता किन भागेर आइ अनि किन बुडासग घर जान मान्दिन भनेर। मेरो पुतिले रबिनको लाडोलाइ च्याप्प समातेको थियो। अब रबिनले 8″लामो लाडो पुरै छिराउदै निकाल्न थाल्यो। म आनन्दको सागरमा डुब्दै गइरहेको थिए । उसले चिकाइको स्पीड बिस्तारै बढाउदै लगो। म विभिन्न खाल्को आवाज निकालिरहेको थिए ।
रबिनको लाडोको फेद मेरो पुतिको डिलमा ठोकिएर ……… “ख्वाततततत…ख्वात….ख्वात…ख्वात.. क्वाँच….क्वाँच……क्वाँच…क्वाँच…..क्वाँच…. ख्वालात…ख्वालात…ख्वालात…… क्वाँच….क्वाँच……क्वाँच…क्वाँच…..क्वाँच”
मेरो पुतीबाट प्रशस्तै पानी बगेकाले आवाज फरक आउन थालेको थियो क्वाँच….क्वाँच……क्वाँच…क्वाँच…..क्वाँच ख्वात….ख्वात…ख्वात. ख्वात….ख्वात… ख्वालात…ख्वाल ात…ख्वालात… ख्वालात क्वाँच….क्वाँच……क्वाँच…क्वाँच…..क्वाँच.. ख्वात….ख्वात…ख्वात. ख्वात….ख्वात…ख्वात. ख्वात…. ख्वालात…ख्वालात…ख्वालात… ख्वालात ….ख्वात…ख्वात.निस्किरहेको थियो भने इमोसनले सी…सी…..उह….आह….आह ……सी…..सी…अझै…. अँ…हँ…..हँ….उह…..गर्नु….गर्नु… आह…अझै …आह….सी…..अँ….हँ… गर्नु न…गर्नु… उह….आह….आह……सी…..सी. ..अँ…हँ…..हँ….उह … मच्चीनु न अझै… उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह उह….आह….आह जस्ता स्वर निक्लिरहेको थियो ।
उ मेरो पुतिमा उसको घोर्ले लाडो रगड्दै थियो ।10 मिनेट अरु चिके पछि मेरो माड निस्कन थाल्यो।त्यो स्वर्गीय आनंदको पल भरी मैले रबिनलाइ च्याप्प समाएर राखे। एकछिन पछि म शिथिल भए। अनि उसलाई छोडिदिए मलाई अर्गाज्म आको कुरा उसले नबुझ्ने कुरै थिएन। उसले झन्झन् जोड जोडले कस्सी कस्सी चिक्न थाल्यो।करिब5मिनेट जति चिके पछि उसले पनि उँ ……उँ ……..उहँ……… आहा ………….मेरि….. रानी…….. उह्ह आह ….इ …..I love u….i love u…. पुति भित्रै चिरिक चिरिक पार्दै माल जति सबै झारिदियो। उसको मालले मेरो पुति भरियो।एकछिन सम्म अंगालोमा बाधे पछि छोडिदिए।
अनि उसले मेरो पुतिबाट लाडो निकाल्यो।मलाई पनि वर्षौपछी भारी बिसाए जस्तै भको थियो । गल्ती गरेको ग्लानी भए पनि मन शान्त भएकोमा खुसी नै थिए । त्यो रात उ म संगै सुत्यो । रातभरिमा उसले5चोटि चिकेर आफ्नो प्यास मेटायो भने मेरो पनि प्यास तृप्त भयो। उ निता नभको बेला दिउसै मलाइ कोठामै तानेर ल्याएर चिक्थ्यो। बुढाले नचिकेपछी मेरो पनि अरुलाइ चिकाउनुको बिकल्प थिएन ।
रबिनसंग पल्किएपछी मौका मिल्न साथ चिकिहाल्थ्यो। रबिन5दिन अरु बसेर नितालाइ लिएर गयो ।नजाउन्जेल सम्म रबिनले पनि डोज पुग्ने गरि चिक्यो। आज यसरी चिक्न थालेको पनि 8 वर्ष भइसकेछ।आजकल पनि मलाई चिक्न मन लागे रबिनलाइ भन्छु । उ पनि नितालाइ विभिन्न बहाना बनाएर आउँछ अनि मलाई भरपुर सन्तुष्टि दिएर जान्छ। निता र बुढालाइ अहिलेसम्म केहि थाहा छैन ।
मैले जिब्रो उसको पुति वरिपरि नचाए।